Dia miomàna koa hianareo; fa ho avy ny Zanak’olona amin’izay ora tsy ampoizinareo – FJKM Ambavahadimitafo Dia miomàna koa hianareo; fa ho avy ny Zanak’olona amin’izay ora tsy ampoizinareo |
Dia miomàna koa hianareo; fa ho avy ny Zanak’olona amin’izay ora tsy ampoizinareo
Publié le 09 novembre 2020 à 08:11
Alahady 08 novambra 2020, alahady faha -22 manaraka ny trinite, hitondrana am-bavaka ny fitantanana ny fanànana eo anivon’ny FJKM; hitondrana am-bavaka ny Antoko Mpihira Ambavahadimitafo (AMA), mbola hibanjinana ny lohahevitra @ ity volana ito : « Miandrandra famonjena ny mino »
Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Lioka 12 : 35 – 40 : « 35Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo; 36ary aoka hianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin’ny fampakaram-bady izy, ka nony tonga sy mandondòna izy, dia vohany miaraka amin’izay. 37Sambatra ny mpanompo izay ho hitan’ny tompony miambina, raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony, dia hampipetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy. 38Ary na avy amin’ny fiambenana faharoa amin’ny alina izy, na avy amin’ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. 39Ary fantaro izao, fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora hihavian’ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony hotamina. 40Dia miomàna koa hianareo; fa ho avy ny Zanak’olona amin’izay ora tsy ampoizinareo. »
Andeha hiara-hiombona amin’ny fanompoam-pivavahana